Akụkọ - Otu esi eme ihe maka ọdịda Valve?
Mgbe ọgbatumtum na-agba ịnyịnya ruo ogologo oge, nhichapụ valvụ ahụ ga-apụta n'ozuzu, oke buru ibu ma ọ bụ obere obere, iji chọta ihe kpatara ya, ịkwesịrị ịjụ ọtụtụ ozi, onye na-eweta ngwongwo moto iji nye gị nyocha dị mfe.
Mmetụta nke nhichapụ valvụ na engine
Nnukwu ma ọ bụ obere engine akụkụ valves maka ọgba tum tum nwechapụ ga-emetụta nkịtị ọrụ nke engine. Emeghe ngwụsị na mmalite mmechi nke valvụ oriri: n'ihi mmeghe valvụ ezughi oke, ọnụọgụ nke nnweta nke ngwakọta combustible ga-ebelata, na-ebute ọdịda nke ike injin.
Nnukwu valvụ ọkụ (ya bụ, oge mmeghe valvụ dị mkpụmkpụ): na usoro ikpochapu, ọ na-eme ka ike gwụrụ, ezughị ezu, ụba ájá mmanụ, ụba igwe ọkụ, ike ọkụ, na ịkụ aka nke valvụ ahụ, na-emetụta ndụ ọrụ. nke akụkụ.
Oge mmalite na mbubreyo mmechi nke ọgba tum tum oriri moto(oge nke imeghe valvụ ahụ toro ogologo): ọ na - akpata nkwụsị valvụ na ikuku ikuku, nke na - ebelata mkpakọ na ike injin. N'ọnọdụ ndị siri ike, valvụ ahụ ga-eme nnukwu ego carbon ma ọ bụ abla, nke mere na cylinder enweghị ike ịrụ ọrụ.
Obere valvụ a na-ekpochapu: ọ na-eduga na nkwụsị valvụ na-ekpuchi na ikuku ikuku na Nanchang, ya mere, ọkụ ahụ ezughị ezu ma belata ike. Mgbe ụfọdụ a ga-enwe iyuzucha ọkpọkọ ọgbụgba ọkụ onu.
Otu esi emeso mmebi nke igwe moto moto
1. N'elu valvụ ahụ gbawara ma ọ bụ wepụ, nke a ga-edochi ya.
2. Mgbe a na-eyi ihu ihu ngwugwu valve, ọ nwere ike ịdakwasị na grinder cylindrical mpụga ma jiri ya mee ihe mgbe ọ dị mma.
3. Ogo ogo nke valvụ ahụ karịrị 0.03mm. Mgbe mgbagha dị n'elu valvụ ahụ gafere 0.02mm, enwere ike idozi ntopute ahụ site na ịtụkwasị ya na akwụkwọ ntuziaka akwụkwọ wee nyochaa ya na akara ngosi na ígwè V-ruo mgbe ọ ruru eru.
4. Ọ bụrụ na enwere carbon ojii na isi awọ na-acha odo odo na valvụ cone, ọ nwere ike tinye ya na kerosin, wee wepụ ya na scraper osisi ma ọ bụ ahịhịa ọla kọpa mgbe ọ dị nro.
5. Ọ bụrụ na ejighị okpu valvụ ahụ rụọ ọrụ nke ọma na ntụgharị nke gburugburu na cylindricity agabigaghị 0.03mm, a pụrụ ịmịnye valvụ ahụ ka ọ rụọ nha nha nha na igwe na-enweghị igwe, wee mezie ya na usoro plasta chrome.
6. Obere olulu, olulu, wdg. Na valvụ cone elu a na-ewepụkarị aka site egweri aka. Tupu ị na-egweri, valvụ ahụ, oche valvụ, na ntuziaka na-etinye mmanụ ụgbọ ala dị ọcha, ma na cone valvụ a na-ete ya na mpekere na-egweri ya, na-agbagharị roba iji banye valvụ elu ka ọ gbanwee ugboro ugboro ma gbanwee ọnọdụ ahụ, olulu, olulu na ndị ọzọ na-egwupụta.
Mgbe mgbanaka na-acha ọcha na-apụta na cone valvụ ahụ, a na-eji valvụ ahụ emee ihe ọma. N’ikpeazụ, sachaa mado ahụ na mmanụ ala, tinye mmanụ ahụ, ghaa ya minit ole na ole.
7. Mgbu olulu, olulu, na ntụpọ na valvụ conical elu kwesịrị imi na valvụ polishing igwe. Ọ bụrụ na akụrụngwa dị n'elu adịghị, valvụ ahụ nwekwara ike ịbụ clamps ma nwee ike ịdọrọ kọntaktị ahụ na kọlet na ntụpọ bench, obere lathe, ma ọ bụ aka igwe eletriki. Mgbe ahụ enwere ike ịmalite valvụ ahụ. Enwere ike ịgba akwụkwọ ntụpọ ahụ na mpaghara ihu igwe na faịlụ dị mma, a ga-ejikwa akwa oyi akwa na-acha ọcha na 00 oyi akwa na faịlụ ahụ. Na-egweri ọsọ ekwesịghị ịdị oke elu, mmegharị ahụ kwesịrị ịdị mma. Ọ bụrụ na achọtara elu nke valvụ ahụ ka ọ dị obere karịa 0.5mm ma ọ bụ mebie, a ga-edochi ya.
Kedu esi emeso mmebi nke akụkụ moto moto moto?
(1) Tinye mmanu dị mkpa nke mmanụ uhie ma ọ bụ mmanụ blueprinting na elu conical valve, wee jiri nwayọ pịa valvụ ahụ n'elu oche valvụ wee gbanwee maka 1/4 ntụgharị tupu ịpụ apụ. Ọ bụrụ na mgbanaka nke mmanụ na-acha uhie uhie na-aga n'ihu ma ọ bụ akara mmanụ na-apụta na oche valvụ pụtara na akara ahụ dị mma.
(2) Site na pensụl dị nro (4B ma ọ bụ 5B) see ọtụtụ ahịrị na elu cone valve, wee kpọtụrụ oche oche ahụ na-atụgharị 1/4 ntụgharị mgbe ọ dọpụsịrị, dị ka ahịrị pensụl na valvụ a na-egbutu. apụ, na-egosikwa akara dị mma.
Ọ bụrụ na ị chọrọ inweta ihe ọmụma banyere ezigbo mma valvụ, biko egbula ịjụ anyị.